युक्रेनसँग वार्ता चलिरहेकै बेला रुसले लियो यस्तो निर्णय — Sanchar Kendra
युक्रेनसँग वार्ता चलिरहेकै बेला रुसले लियो यस्तो निर्णय
मस्को । रुसले युक्रेनसँगको शान्तिवार्तामा आपसी विश्वास प्रबर्द्धन गर्ने उद्देश्यले युक्रेनका दुईवटा प्रमुख क्षेत्रमा सैनिक आक्रमण अभियान घटाउने बताएको छ । गत २४ फ्रेब्रुअरीमा रुसले युक्रेनमा आक्रमण गरेयता पहिलोपटक वार्तामा प्रगति भएको संकेतस्वरूप युक्रेनको राजधानी किभ र उत्तरी सहर चेर्निहिभमा रुसले आक्रमण घटाउने निर्णय गरेको हो ।
युक्रेनले सुरक्षा ग्यारेन्टीको बदलामा आफू विश्वका कुनैपनि सैनिक गुट वा उपगुटमा संलग्न नरही तटस्थ बस्ने प्रस्ताव अघि सारेको थियो । रुसले युक्रेनलाई उत्तर एटलान्टिक सन्धि संगठन नेटोको सदस्य बन्न नदिन पछिल्लो आक्रमण गरेको हो । रुसी अधिकारीहरूले टर्कीको इस्तानबुलमा भएको शान्तिवार्ता व्यवहारिक चरणमा प्रवेश गरेको बताएका छन् ।
वार्तामा भाग लिँदै आएका रुसी उपरक्षामन्त्री अलेक्जान्दर फोमिनले रुसी टेलिभिजनालाई भनेका छन्, “युक्रेनको तठस्थता र गैरआणविक स्थिति एवं सुरक्षा ग्यारेन्टीले वार्तामा प्रगति भएको छ । तसर्थ रक्षा मन्त्रालयले थप वार्ता र माथि उल्लेखित सम्झौतामा हस्ताक्षरका लागि आवश्यक परिस्थिति सिर्जना गर्ने उद्देश्यले दुई स्थानमा हमलाको स्वरुपमा परिवर्तन गर्ने निर्णय लिएको हो ।“
केही साताका लागि किभमा आक्रमण मन्द गर्न लागेको रुसले अहिले आफ्नो ध्यान पूर्वी युक्रेनका विभिन्न क्षेत्र र क्रिमियातर्फ जाने दक्षिणी भूभाग कब्जा गर्न केन्द्रित गरेको छ । यसैबीच रुसी फौजले चेर्नीहिभ सहरमा घेराबन्दी गरिरहेको छ भने युक्रेनी फौजले इर्पिन र माकारिभलगायत राजधानीदेखि उत्तर पश्चिममा पर्ने सहरहरूमाथि फेरि नियन्त्रण कायम गरेको छ ।
यस्तै रुसले उसका ‘बैरी’ देशहरूलाई प्राकृतिक ग्यासको आयात रुबलमा सुरु गर्न मार्च ३१ को समय सीमा दिएको छ । व्यापारमा प्रयोग हुने मुद्रा फेरिने भएपछि रुसमाथि आर्थिक प्रतिबन्ध लगाउने देशहरु प्रभावित हुनेछन् । यसले विशेषगरी ठूलो परिमाणमा रुसी ऊर्जामाथि निर्भर रहँदै आएका ईयूका मुलुकहरुमा प्रभाव पर्ने छ ।
मार्च ३१ पछि के हुन्छ ?
यदि यी मुलुकले रुबलमा भुक्तानी नगरेमा युुरोपले सित्तैमा ग्यास नपाउने रुसले जनाएको छ । ‘हामी सित्तैमा ग्यासको आपूर्ति गर्ने छैनौं, यो स्पष्ट छ,’ क्रेमलिनका प्रवक्ता दिमित्री पेसकोभले बताए ।
भुक्तानी नगर्नेलाई ग्यास रोकिनेछ ? भनि सोधिएको प्रश्नमा भुक्तानी नगर्नेलाई ग्यास नदिइने पेसकोभले बताए ।
‘भुक्तानी छैन, ग्यास पनि छैन,’ उनले थपे । युरोपेली मुलुकहरुले रुसी मुद्रामा भुक्तानी गर्न अस्वीकार गरेमा कस्तो खालको निर्णय गरिन्छ भन्ने विषयमा रुसले अझैसम्म केही बताएको छैन ।
रुसी ग्यासमा कत्तिको निर्भर छ युरोप ?
न्यानो बनाउन र ऊर्जा उत्पादनका लागि युरोप ठूलो मात्रामा रुसी ग्यासमाथि निर्भर रहँदै आएको छ । युरोपको कुल उपभोगको त्यस्तै ४० प्रतिशत रुसी ग्यास रहेको छ । यो वर्ष ईयूले रुसबाट गरेको ग्यासको आयात प्रतिदिन २० करोड र ८० करोड युरोकाबीच छ ।
रुसी ग्यासबिना के हुन्छ युरोपमा ?
युरोपेली आयोगले रुसी ग्यासमा ईयूको रहेको निर्भरतालाई यो वर्ष २ तिहाइले कटौती गर्ने योजना बनाएको छ । यद्यपि अर्थशास्त्रीहरूका अनुसार ईयूमा २०२१ मा भएको एक हजार ५५० टेरावाट–आवोर्सको भएको आपूर्तिलाई सहज हुनेछैन । युरोपले यसबाट हुने अभाव तत्कालै विस्थापित भने गर्न सक्दैन । यसका लागि माग नियन्त्रण गर्नु आवश्यक छ । जर्मनका चान्सलर ओलाभ स्कोल्जले रुसी ऊर्जा आयातमाथिको प्रतिबन्धले युरोपभरि आर्थिक मन्दी आउन सक्ने चेतावनी दिइसकेका छन् ।
के हुनेछ वृहत निहितार्थ ?
यसले विश्वव्यापी ऊर्जा संकटको जोखिम ल्याउने छ । रुस विश्वकै ठूलो प्राकृतिक ग्यास निर्यातकर्ता मुलुक हो र साउदी अरेबियापछि दोस्रो ठूलो कच्चा तेलको निर्यातक पनि रहेको अन्तर्राष्ट्रिय ऊर्जा एजेन्सीले जनाएको छ । रुसी ग्यासलाई विस्थापित गर्न सहज छैन । युरोपले खुला बजारमा ग्यास किन्नु पर्ने हुन्छ । यसको अर्थ यदि उनीहरुले कतार तथा अमेरिकाबाट ग्यास किनेमा बढी मूल्य तिर्नुपर्छ ।
तेलको मूल्य प्रभावित होला ?
रुसले युरोपेली संघका मुलुकहरुमा प्रतिदिन ४० लाख ब्यारेल तेल प्रतिदिन आपूर्ति गर्दै आएको छ । ग्यासको विपरीत दीर्घकालिन सम्झौता भएकाले तेलको मूल्य अस्थिर र आपूर्ति तथा मागबाट निश्चित हुने गरेको छ । यदि युरोपले रुसी तेल त्याग्ने निर्णय गरेमा कच्चा तेलको मूल्य प्रति ब्यारेल २०० डलर पुग्न सक्छ र योभन्दा पनि माथि जान सक्ने विश्लेषकहरुले चेतावनी दिएका छन् ।
रुसले अन्य कमोडिटी पनि रुबलमै बिक्री गर्ला ?
राष्ट्रपति भ्लादिमिर पुटिनले प्राकृतिक ग्यास पहिलो रुबलमा भुक्तानीको माग गरिने कमोडिटी हुने बताइसकेका छन् । यदि पश्चिमाले थप प्रतिबन्ध लगाएमा अन्य रुसी बस्तु पनि रुबलमै भुक्तानी हुन सक्छ । यसमा कच्चा तेल, कोइला, धातु, खनिज, बहुमूल्य पत्थर, काठ, मल, खाने तेल र अन्न लगायतका बस्तु समावेश छन् ।
भुक्तानीको समयसीमा नजिकिएपछि सबैभन्दा पहिले कसलाई अप्ठ्यारो पर्छ ?
हालसम्म ईयू र जी–सेभेनका राष्ट्रहरुले ग्यासको भुक्तानी रुबलमा गरिनु पर्ने रुसी माग अस्वीकार गर्दै आएका छन् । रुसले सित्तैमा ग्यासको भुक्तानी नगर्ने बताइसकेको छ । यस अनुसार उसले ग्यासको आपूर्ति रोक्न सक्छ । यदि त्यसो भयो भने मस्कोले दैनिक २० करोडदेखि ८० करोड युरोसम्म गुमाउन सक्छ । यद्यपि रुसले पनि पुनः एसियातर्फ ग्यासको आपूर्ति गर्न सक्छ । युरोपले दोस्रो विश्व युद्धदेखि नै नदेखेको आर्थिक संकट भोग्न सक्छ । यस्तो अवस्थामा युरोपनै झुक्न सक्छ ।